🥇 Laptọọpụ kachasị mma maka ihe na-erughị 1000 euro 🥇 Kedu nke ị ga-ahọrọ?
Ị nwere mmefu ego nke euro 1000 maka laptọọpụ ọhụrụ gị? N'ime ntuziaka a, ị ga-ahụ ụdị kachasị mma maka ika ọ bụla dabara na mmefu ego gị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere Laptọọpụ maka ihe na-erughị € 1000, nọgide na-agụ. Gịnị ka ha nwere inye anyị? Ebe a ka anyị kọwara gị ya.
1 Laptọọpụ kacha mma maka euro 1000
2 Ụdị laptọọpụ kacha mma na-erughị 1000 euro
3 Enwere laptọọpụ egwuregwu na-erughị € 1000?
4 Kedu ihe laptọọpụ na-erughị € 1000 nwere ike inye gị?
4.4 Draịvụ ike
5 Laptọọpụ n'okpuru 1000 euro ọ bụ ezigbo nhọrọ?
Laptọọpụ kacha mma maka euro 1000
Laptọọpụ HP 15S-FQ4065NS ...
Ụdị laptọọpụ kacha mma na-erughị 1000 euro
Ọ bụrụ na ị na-achọ ozi gbasara HP, ị na-ahụ na ọ tọrọ ntọala na 2015 na ị na-amaghị ihe ọ bụla banyere ika, ihe ga-adị nnọọ iju m, eleghị anya ị na-eche na otú ọ ga-ekwe omume na ọ bụ na nke a ndepụta. ịbụ otu ụlọ ọrụ na-eto eto. Ihe kpatara ya bụ ee, HP tọrọ ntọala afọ isii gara aga, mana ọ bụghị ọhụrụ. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị si na Hewlett-Packard kewara, Ya mere, anyị na-ekwu n'ezie banyere ụlọ ọrụ nke nwere ihe karịrị afọ 80 nke ahụmahụ n'azụ ya.
HP 15s -fq4087ns -...
Dị ka Hewlett-Packard, ha ghọrọ ndị a ma ama karịsịa maka ndị na-ebi akwụkwọ ha, ọ bụ ezie na ha mekwara kọmputa. Mgbe nkewa gasịrị, HP, nke bụbu akara dị mkpa n'ụwa a, kwalitere nke ukwuu ma ugbu a ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma n'agbanyeghị ụdị kọmputa ị na-achọ.
ASUS bụ akara Taiwanese nke anyị ga-ahụ n'ọtụtụ ngwaahịa, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile metụtara kọmpụta. Ọ na-arụpụta ụdị ọ bụla nke mpụta na akụrụngwa maka kọmpụta, yana ekwentị mkpanaaka na mbadamba, na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọ bụ na nke a na ndepụta ndị ọzọ, ọ bụ n'ihi na n'ime ihe karịrị afọ 20 ọ ghọrọ otu n'ime ndị na-emepụta kọmputa kasị mma n'ụwa, na-eru ọnọdụ nke anọ na 2015.
ASUS VivoBook Pro 14X…
N'ịbụ ụdị ama ama ama na ụwa nke kọmpụta, ọ bụ otu n'ime ihe mbụ anyị ga-enyocha mgbe anyị chọrọ ịzụrụ kọmputa ọ bụla, na ha bụ nzọ dị mma na, na mgbakwunye, ga-enwe ezigbo uru maka ego.
Sitekwa na Taiwan si na Acer, ụlọ ọrụ ọzọ na-arụpụtakwa ọtụtụ ihe maka kọmputa na kọmputa n'onwe ha. A naghị ama ha dịka ndị agbata obi ha, mana ihe niile anyị nwere ike ikwu gbasara ndị ọzọ anyị nwere ike ikwu maka Acer.
Ha na-eji kọmputa eme ihe ezigbo uru maka ego, amakwaara m ọtụtụ ikpe, gụnyere mụ onwe m, banyere ndị zụrụ otu ma ọ bụ karịa n'ime kọmputa ha ma nwee obi ụtọ na ha. Na ihe niile nwere ezigbo uru maka ego na ogologo oge.
Lenovo bụ ụlọ ọrụ sitere na China na-arụpụta ma na-ere ọtụtụ ihe eletrọnịkị, dị ka mobiles na mbadamba, kọmputa, na-ebi akwụkwọ, worktations ... na ọbụna PDAs. Ha na-ewu ewu nke ukwuu na akụkụ n'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ kọmputa ha, ihe dị otú ahụ n'ihi na ọtụtụ n'ime ha nwere ihe karịrị ọnụ ahịa asọmpi.
Lenovo V15 - Kọmputa ...
Ma Lenovo ọ bụghị nanị na-emepụta kọmputa dị ọnụ ala, ndị na, ọ ga-abụrịrị na ọ bụghị ndị kasị mma na ahịa; ụlọ ọrụ ahụ kwa na-arụpụta kọmpụta ndị ọzọ nwere nhazi na akụrụngwa kacha mma nke na-atọ ndị ọrụ na-achọsi ike ụtọ, gụnyere ndị egwuregwu na ndị ọkachamara. Site n'ụdị ahụ dị iche iche, ọ dị mfe ịchọta kọmpụta na-erughị $ 1000 bụ ihe dị mma, ọnụ ahịa nke ọma na ihe ndị na-adịgide adịgide.
Huawei bụ ụlọ ọrụ China tọrọ ntọala na 1987 na ihe karịrị afọ 10 gara aga malitere imeri mba ndị dị ka Spain. Dị ka ọtụtụ ihe ọ na-abịara anyị si China, malitere ime ka anyị kwenye na ọnụahịa kacha mma, na ngwaọrụ ndị a họọrọ iji mee ka ọdịda ya bụ smartphones. Ọ bụ ezigbo kaadị azụmahịa, ma ugbu a, anyị nwere ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ nwere akara a, dị ka telivishọn.
Huawei Matebook X Pro -…
Huawei dị ugbu a otu n'ime ndị na-emepụta teknụzụ kachasị mkpa na mbara ala, karịrị naanị ụdị dị ka Apple na Samsung, ndị dike abụọ na-ahapụ obere oke maka ndị ọzọ. Kọmputa ha bụ nhọrọ dị mma ebe ọ bụ na, ebe ọ bụ na obere oge na ahịa a, ha na-aga n'ihu na-enye laptọọpụ dị mma na ọnụ ahịa asọmpi.
Micro-Star International, Co., Ltd, nke a maara nke ọma dị ka MSI, bụ ụlọ ọrụ China nke ọpụrụiche n'ichepụta na ire akụrụngwa kọmputa, yana peripherals. N'ime katalọgụ ya nke kọmputa anyị na-ahụ ụdị niile, dị ka tower, All-in-one (AIO), ụlọ ọrụ mmepụta ihe, yana nne nne na eserese na laptọọpụ.
Banyere akwụkwọ ndetu, MSI bụ ama ama maka kọmputa ya emebere maka egwuregwu, nke na-eme ka o doo anyị anya na ha nwere ike ịmepụta ngwá ọrụ dị ike, dịgidere na nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụrụ laptọọpụ, ma ịchọghị ka ọ bụrụ nke dị ọnụ ala, MSI bụ otu n'ime ụdị ndị ị kwesịrị ịlele.
Enwere laptọọpụ egwuregwu na-erughị € 1000?
Ee ee ha dị, mana ị ga-akpachara anya ma lelee nkọwapụta ya. Laptọọpụ egwuregwu bụ nke a na-eji egwuri egwu, yabụ na ọ ga-emezu ihe ụfọdụ a chọrọ. N'ime ihe ndị a chọrọ, imewe ya na kiiboodu na-apụtakarị ìhè, nke na-enye anyị ohere iji nkenke nke ọma pịa igodo mgbe anyị na-anụ ụtọ egwuregwu anyị. Mana echere m na anyị ga-eburu ihe abụọ n'uche:
O yikarịrị ka, mgbe anyị na-achọ "laptọọpụ egwuregwu" na ụlọ ahịa, ihe anyị na-ahụ bụ, n'ezie, laptọọpụ iji egwu egwu, ma, Kedu mgbe ihe nlereanya si? A ga-eji akara ahụ na-ere laptọọpụ egwuregwu mgbe niile, mana ọ bụghị otu ihe ịzụta site na 2015 karịa otu site na 2020 gachara. Ihe mejupụtara ya na-akawanye mma ka oge na-aga ka ha wee nwee ike ibugharị aha ọhụrụ. Laptọọpụ egwuregwu site na 2015 ruo taa nwere ike ịbụ ezigbo kọmpụta iji rụọ ọrụ.
Ihe ọzọ m chere na anyị kwesịrị iburu n'uche bụ Kedu nkọwapụta ọ gụnyere. Maka ndị egwuregwu na-achọsi ike, laptọọpụ egwuregwu na-erughị € 1000 agaghị ezuru, ebe ọ bụ na ha chọrọ ndị nhazi kachasị mma, RAM dị ka o kwere mee, ihuenyo kachasị mma, igodo na draịvụ ike, na nke ahụ agaghị ekwe omume ịchọta na a. laptọọpụ na-erughị € 1000.
Ya mere azịza ya bụ ee, ha dị, mana ha agaghị abụ ndị kacha ike ma eleghị anya ha na-ebuli utu aha ụfọdụ n'ụzọ siri ike.
Kedu ihe laptọọpụ na-erughị € 1000 nwere ike inye gị?
€ 1000 bụ nnukwu ego na ọnụahịa ahụ nwere ike ịgụnye ọtụtụ ihe. Banyere ihuenyo, anyị nwere ike ịchọta ihe kacha mma, ma enwere ihe siri ike ịchọta: 17-inch screen, nke kachasị. Ee ọ na-ahụkarị ịhụ ụfọdụ laptọọpụ nwere ihuenyo 15.6 sentimita na mkpebi 4K, nke anyị nwere ike iji rụọ ọrụ, gwuo egwu ma ọ bụ nwee oge ntụrụndụ anyị nwere echiche dị mma.
Mana nke a dị n'elu apụtaghị na kọmputa ọ bụla dị n'akụkụ ọnụ ahịa ndị ahụ ga-enwe ihuenyo ọkọlọtọ. Mgbe ụfọdụ, onye nrụpụta na-elekwasị anya na obere akwụkwọ ndetu iji mee ka ha dị ọkụ, na-ewepụghị ihe ndị ọzọ dị ka ihe nrụpụta. Ya mere, laptọọpụ n'okpuru € 1000 na-enwekarị ihuenyo dị mma na mkpebi dị mma na nha ha dịgasị iche n'etiti 13 sentimita asatọ site na ụfọdụ Ultrabook na 15.6 sentimita asatọ nke ọkọlọtọ nha.
Dịka anyị kwurula, € 1000 abụrụlarị ọnụ ahịa dị mkpa, yabụ ọtụtụ ihe mejupụtara ya ga-adịkwa. Otu n'ime ndị kasị ọnụ na ihe ụdị na-eji mee ka anyị kwenye ịzụta a laptọọpụ bụ ya processor. Enwere ọtụtụ Laptọọpụ maka ihe karịrị € 500 nke gụnyere ugbua Intel i7 ma ọ bụ ihe nhata, yabụ anyị nwere ike ịsị na ọtụtụ n'ime ndị na-erughị 1000 ga-ebu ihe nrụpụta ahụ.
Dị ka ọ dị na ihuenyo inch 17, ọ ga-adị ụkọ maka laptọọpụ n'okpuru $ 1000 nke nwere Intel i9 ma ọ bụ dakọtara, m ga-asị na ọ gaghị ekwe omume. Ndị na-emepụta ihe na-etinye ụfọdụ ihe mgbochi ma ọ bụ akụkụ, na ihe atụ doro anya bụ ihe ha na-eme na nha nke telivishọn: 36-38-inch nwere ike inwe ezigbo ọnụahịa na ọbụna ọnụ ala, ma ọ bụrụ na anyị na-arị elu ntakịrị, na 42 sentimita asatọ. ọnụ ahịa ahụ nwere ike ọ dịkarịa ala okpukpu abụọ. Otu ihe ahụ na-eme na nhazi kọmputa: ọ bụrụ na ị na-achọ onye nwere ihe i9 ma ọ bụ ihe dakọtara, ị ga-akpacha akpa gị. Ọtụtụ.
Ọ ga-ekwe omume na anyị ga-ahụ nke na-efu 500-1000 na processor Intel i5 ma ọ bụ dakọtara, mana ha ga-abụ kọmpụta nke ga-agụnye ihe ndị ọzọ dị elu dị ka ezigbo imewe, keyboard, diski ike, ndịna-emeputa na ihuenyo. Anyị nwere ike iche na ọ ga-abụ ihe ijuanya, ruo mgbe anyị na-echeta na e nwere ụdị dị ka Apple na ndị na-ere ahịa ikike ma ọ bụ ndị na-ere ahịa, ebe ọ dị mfe ịchọta ngwá ọrụ ochie na reconditioned.
RAM abụghị akụrụngwa kachasị ọnụ nke etinyere na kọmpụta, yabụ na ọtụtụ oge anyị na-ahụ nnukwu ebe nchekwa a n'etiti nkọwapụta nke laptọọpụ. O siri ike ikwu ole RAM kọmpụta nke na-eri ihe na-erughị € 1000 ga-agụnye, mana o yikarịrị ka ọ ga-agụnye. 8GB kacha nta.
Dị ka e nwere laptọọpụ nwere nhazi dị iche iche, na-ekwughachikwa na € 1000 abụrụlarị ọnụ ahịa dị mkpa na kọmputa nkịtị, ọ ga-ekwe omume na anyị ga-ahụ. Ọtụtụ ndị nwere 16GB nke RAM, na ọbụna ndị ọzọ. Enwere ike ịchọta ụfọdụ ndị nwere 32GB nke RAM, ọ bụghị 100%, mana ha ga-abụ ndị dịpụrụ adịpụ nke ụdị ama ama. Ma, agaghị m nzọ na ya. Ihe ezi uche dị na ya na nke a na-ahụkarị bụ 16GB Ram kwuru.
Draịvụ ike na laptọọpụ na-erughị $ 1000 agaghị emepụta gị nsogbu nchekwa. Anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ nhọrọ, mana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ga-agụnye ihe na SSD. M kwuru "ihe" n'ihi na enwere diski ngwakọ, Ebe otu akụkụ bụ SSD na nke ọzọ bụ HDD, nke mbụ bụ ngwa ngwa na ebe sistemụ arụmọrụ na-aga na nke abụọ dị ọnụ ala, ebe a na-etinyekwu gigs na ebe anyị ga-echekwa data.
Ya mere, laptọọpụ n'okpuru € 1000 bụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ ga-agụnye ihe SSD, ma ihe siri ike bụ ịmata ole. Anyị ga-ahụ 512GB 100% SSD, mana enwerekwa ndị ọzọ nwere 128GB ma ọ bụ 256GB na SSD wee 1TB ma ọ bụ karịa na HDD. Dịka m kwuru, nchekwa na laptọọpụ n'okpuru € 1000 agaghị abụ nsogbu. N'iburu nke ahụ n'uche, anyị ga-ekpebi ma anyị ga-achọkwu SSD ma ọ bụ ngwakọ ebe anyị nwere ike ịchekwa ozi ndị ọzọ.
Laptọọpụ n'okpuru 1000 euro ọ bụ ezigbo nhọrọ?
Maka m ma ọ bụrụ. Ụmụnne m na ọtụtụ ndị enyi m nwere n'isi. Ọ bụ maka gị? Ikekwe kwa. Laptọọpụ nke ihe dịka € 1000 ga-abụ a nnukwu nhọrọ maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ, na akụkụ ndị ha gụnyere na-enye anyị ohere ime ihe nile fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nile. Ya mere, m ga-ajụ ajụjụ ọzọ: maka onye na-adịghị mma?
Ha agaghị abụ ezigbo nhọrọ maka ndị ọkachamara na ndị egwuregwu kacha achọ. Dị ka anyị kwurula na mbụ, ndị ọkachamara a na-ahọrọ maka kọmputa dị ukwuu ma dị ike karị, ndị na-egwu egwuregwu na-ahọrọkarị laptọọpụ nwere ihuenyo 17-inch na Intel i9 processor ma ọ bụ ihe dakọtara na-abụghị maka ọnụahịa a. Yabụ, ọ bụrụ na ịnọghị n'otu n'ime ikpe ndị a, laptọọpụ nke na-erughị € 1000 masịrị gị, ma ọ bụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nwere afọ ojuju na ihe dị nso na nkezi.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ahịa » Laptọọpụ maka ihe na-erughị 1000 euro